Google Pixel3နဲ့ Pixel3XL တို့ရဲ့ Render Video နဲ့ပုံတွေပေါ်ထွက်လာ – DigitalTimes
နည်းပညာဒီဇိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုရမယ့် Google Pixel3နဲ့ Pixel3XL တို့ရဲ့ Render ပုံတွေကတော့ Mysmartprice နဲ့ @OnLeaks တို့ကနေထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာထွက်လာမယ်လို့မှန်းရတဲ့ ဒီဟန်းဆက် ၂လုံးရဲ့ 360-Degree ဗီဒီယိုတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို Impress ဖြစ်စေလား ကြည့်ကြည့်ရအောင်..
Render ပုံတွေပဲ တကယ်မှမဟုတ်တာဆိုပေမယ့်လည်း OnLeaks ဆိုတာက ထွက်လာမယ့်စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ပုံတွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ တိကျတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အခု Pixel3XL ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ ထိပ်ဘက်မှာလည်း Notch ပါလာသလို ရှေ့ဘက်မှာလည်း Dual-Camera ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
ပုံတွေအရတော့ Pixel3XL က 19:9 Display ဖြစ်ပေမယ့် ပုံမှန် Pixel3ကတော့ 18:9 Screen ကိုမှ ထိပ်ဘက်မှာ Notch လည်းမပါတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျောဘက်မှာတော့ ခုခေတ်စားနေသလို Dual-Camera နဲ့မဟုတ်ဘဲ ထုံးစံအတိုင်း ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပဲ လာပြန်ပါတယ်။ ကင်မရာတစ်လုံးထဲလည်း ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာ အရင် Pixel2တွေကတည်းက သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးသားပါပဲ။ အရင် Pixel တွေလိုပဲ USB Type-C ပဲသုံးပေးထားပေမယ့် 3.5 mm နားကြပ်ပေါက်ကတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့မပါလာပြန်ပါဘူး။ SIM ကဒ်ပေါက်ကို ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေဘက်မှာထားလိုက်တာကတော့ Pixel စီးရီးတွေထဲမှာ ဒါပထမဆုံးပါပဲ။
Mysmartprice အရဆိုရင်တော့ Pixel3က 145.6 x 68.2 x 7.9 mm နဲ့3XL တွေကတော့ 158 x 76.6 x 7.9 mm ရှိပါတယ်။ ခါတိုင်းလို Fingerprint Scanner အဝိုင်းလေးက ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတွေ့ရဆဲပါပဲ။
ထွက်မယ့်ရက်ကို မကြေညာသေးပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တာကတော့ စက်တင်ဘာ အောက်တိုဘာလမှာထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုထွက်လာတဲ့ Render ဗီဒီယိုတွေ ပုံတွေကနေ တွေ့ရတဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပြီး Pixel3ဖုန်းတွေအပေါ်အမြင်က??